विवाह भएको १२ दिनमै बेहुली सु’त्केरी भएपछी म’च्चियो खै’लाबै’ला ! – Life Nepali
विवाह भएको १२ दिनमै बेहुली सु’त्केरी भएपछी म’च्चियो खै’लाबै’ला !
एजेन्सी । भारतको मध्यप्रदेश राज्यस्थित रायसेन जिल्लाको मोतिपुरा गाउकी एक महिलाले बिहे गरेको १२ दि’नमै बेहुली सु’त्केरी भएको घ’टनालेयतिबेला उनका परिवारसँगै आफन्त समेत च’कित परेका छन् । बिहे भएर ससुरालीमा गए पछि घरमा नै बच्चा जन्माएकी ति महिलका परिवारले सोधपुछ गरेपछि खुलेको तथ्य अझ च’कितलाग्दो छ । नवविवाहित ती महिलाले आफू प’टक–प’टक ब’ला’त्का’र भएको बताएकी छन् ।
गाउँकै २२ वर्षीय काशीरामले आ’फूलाई प’टक–प’टक ब’ला’त्का’र गरेको उनले बताएकी हुन् । ब’दनाम गर्ने ड’र देखाएर काशीरामले आफूलाई प टक–प टक ब’ला’त्का’र गरेको जि’किर गर्दै उनले विवाह अघि पतिसँ ग पनि स म्बन्ध राखेको खु लासा गरेकी छन् । उनको करिब एक वर्षअघि विवाहको छि नोफा नो भएको थियो ।
विवाह हुने टुंगो लागिसकेपछि आफूलाई भे ट्न पटक–पटक आउँदा हुनेवाला पतिसँ गसमेत स म्बन्ध राखेको उनले खु लासा गरेकी छन् । मामला प्रहरीसमक्ष पुगिसकेको र काशीरामविरु द्ध ब’ला’त्का’रको मु’द्दा दर्ता गरिएको प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । पतिका वि’रुद्ध भने का रवा ही हुने हो वा होइन भन्ने खुलाइएको छैन । प्रहरीले ती महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको पिता पत्ता लगाउन डिएनए परीक्षण गराउने भएको छ । ति महिला टु’हुरी भएको र उनीसँग धेरैले यौ’न स म्बन्ध राखेकाले बच्चाको बाबु पत्ता लगाउन गा’ह्रो भएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेको छ।
Previous के तपाइँलाई थाह छ ? यी कुराहरु महिला, पुरुषसंग सँधै लु’काउछन !
Next ‘म’ अपाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नि’यमित से*क्सको अनुभव लिइरहेकी छु !